စိန်ထွန်း - ဝီကီပီးဒီးယား
Did not recognize date. Try slightly modifying the date in the first parameter. (အသက် ၇၂)
(B.Sc. ရူပဗေဒ၊ ၁၉၆၂)
(M.Sc. ရူပဗေဒ၊ ၁၉၆၇)
(Ph.D ရူပဗေဒ၊ ၁၉၇၃)
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရူပဗေဒဌာန ဌာနမှူး
ဒေါက်တာစိန်ထွန်းသည် နိုင်ငံတကာ အနုမြူစွမ်းအင် အေဂျင်စီ (IAEA) အသိအမှတ်ပြု ပညာရှင်၊ အက်တမ်နှင့် အနုမြူ ရူပဗေဒနယ်ပယ် သုတေသနပညာရှင်၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် သုတေသန ဓာတ်ပြုစက် (Research Reactor) လည်ပတ်အောင် ကြိုးစားခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန် စိန်ပေါလ် သာသနာပြုကျောင်းမှ ၁၉၅၈ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရူပဗေဒဌာနမှူးဟောင်း ပါမောက္ခဒေါက်တာစိန်ထွန်း တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းတွင် ပထမဆင့်၊ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်မှ ရူပဗေဒသိပ္ပံ (ဂုဏ်ထူး) (၁၉၆၂)၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံ ဆာရေးတက္ကသိုလ်မှ မဟာသိပ္ပံ (၁၉၆၇)၊ ပါရဂူ (၁၉၇၃) ဘွဲ့များနှင့် MInstP IOP Lond,1968;CPhys FInstP Lond, 1982; CSci 2004,London ပညာရေး သဟာယ အဖွဲ့များတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
Comments:A peep behind the curtain of Myanmar education system (Burma Digest's article): ဟု Facebook မှတ်စုရေး၍ မြန်မာနိုင်ငံ ပါရဂူဘွဲ့ယူ သင်တန်းများဘက်မှ ခုခံပြောဆိုခဲ့သည်။
“ပညာရပ်ကို တန်ဖိုးထားတဲ့ သူလိုလူမျိုးရှားတယ်၊ ဆရာခ (ဒေါက်တာမောင်မောင်ခ)၊ ဦးစံသာအောင်တို့ တပည့် မြန်မာပြည်ရဲ့ နောက်ဆုံးပညာရှင်အစစ်မျိုးဆက်ပါပဲ” ဟုလည်း တပည့်ဟောင်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဦးလှညွန့် (IAEA)၊ ဒေါက်တာဖရယ်ဒီဘလှီ (အသုံးချသုတေသနဌာန)၊ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာတင်အောင်၊ ဦးသိန်းဦးဘိုးစော၊ ပါမောက္ခဒေါက်တာတင်လှိုင် (ဘိုးလှိုင်) စသူတို့မှာ အစောပိုင်း မြန်မာအဏုမြူ ရူပဗေဒပညာရှင်များ ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရူပဗေဒဌာနမှူးဟောင်း ပါမောက္ခ ဒေါက်တာစိန်ထွန်းသည် ၂၀၁၁-ခု၊ ဇန္နဝါရီလ(၂၄)ရက် အသက် ၇၁ နှစ်အရွယ် ရန်ကုန်၌ ကွယ်လွန်သွားသည်။
↑ "Dr. Sein Tun passes away at 71"၊ Mizzima၊ 26 January 2011။ 8 April 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စိန်ထွန်း&oldid=444714" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉၊ ၀၄:၀၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။